मातातीर्थ औंसी : आमा सम्झाउने उखान टुक्काहरु
३ वैशाख, काठमाण्डौ । आज मातातीर्थ औंसी, आमाको मुख हेर्ने दिन सबैले आफ्नी आमालाई सम्झेका छन् । कतिजना आमालाई भेटेरै मीठो खानेकुरा खान दिई श्रद्धा व्यक्त गर्दैछन् । जो टाढा छ उसले पनि कुनै न कुनै तरिकाले आमालाई सम्झीरहेको हुन्छ । आज आमा सम्झाउने केही टुक्काहरू पढ्नुहोस् : आमाको दूधको भारा कति गरे पनि तिरिंदैन […]
काठमाडौँ, वैशाख ११ । प्रत्येक वर्ष वैशाखकृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर मनाइँदैछ । यसलाई मातृ सम्मान दिवस पनि भनिन्छ । शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित), आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभाशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ […]
हिन्दु कसलाई भन्ने ?
हिन्दु कसलाई भन्ने ? हिन्दु शब्द वारे सबैलाई स्पष्ट हुनु जरुरी छ । वेद, पुराण, स्मृति, धर्मग्रन्थ एवं सूत्रहरुमा “हिन्दु” शब्द प्रयोग भएको देखिदैन । प्राचीन ग्रन्थहरूमा यस शब्दको प्रयोग भएको नदेखिदा यो शब्दको प्रयोग कहिले देखि भएको हो निश्चित भन्न गाह्रो पर्दछ । शास्त्रहरूमा सबैभन्दा पुरानो मानिने वेद नै हो । वेद भनेको धर्मको मूल […]
काठमाडौँ, १० वैशाख । बन्दाबन्दीका कारण प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण चतुर्दशीको मध्यरातदेखि पाँच दिनसम्म गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रमा मनाइने ऐतिहासिक कान्तिभैरव जात्रा स्थगन गरिएको छ । राजा मानदेवका पालादेखि हालसम्म निरन्तर चलेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कान्तिभैरव जात्रा बुधबार मध्यरातदेखि गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा शुरु गर्ने विधि रहेकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट नगरवासीलाई बचाउन स्थगन गरिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता […]
घरमै पढ्छन् मुसलमानले नमाज
दमौली, १० वैशाख । बन्दाबन्दीका कारण मस्जिद बन्द गरिएपछि तनहुँ जिल्लाका मुस्लिमहरुले घरमै नमाज पढ्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बन्दाबन्दी गरिएपछि यहाँका मुस्लिम समुदायले घरमै नमाज पढ्न थालेका हुन् । व्यास नगरपालिका–४ स्थित दमौली मुस्लिम अन्जुमन कमिटीका सचिव मन्सुर अहमदले बन्दाबन्दी भएसँगै मुस्लिम समुदायले घरघरमै नमाज पढ्न थालेको जानकारी दिनुभयो । […]
अन्योलमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा
काठमाडौँ, ९ चैत । सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथ आफैँ भने अनिकालको चेपुवामा परेका छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा के गर्ने भनी अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । वैशाख शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् आगामी वैशाख १२ गते मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म रथ निर्माण हुन सकेको छैन […]
के कलियुग शुरू भए‍र अन्त्य हुने अवस्थामा त छैन ?
के कलियुग शुरू भए‍र अन्त्य हुने अवस्थामा त छैन ? मानिसको शत्रु भनेको प्रकृति होइन मानिस नै हो । मानिसले पैसा कमाउन मानिसको नै हत्या गर्दैछ । कोहि प्लाष्टिकको चामल बनाएर त कोही प्लाष्टिकको अण्डा बनाएर कोही तरकारीमा बिषादी मिलाएर होस् या जैविक हतियार बनाएर होस् । चाहे जे होस् मानिस ले मानिसलाई लुट्दैछन् । […]
गोदावरीका धार्मिक क्षेत्र अवलोकन
ललितपुर, ७ वैशाख । गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यहाँका धार्मिक क्षेत्र अवलोकन गरेका छन् । विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त बनेको बेला यी धार्मिक क्षेत्रमा कोही मानिस आई लुकेर बसेका छन् कि भन्ने जानकारी हासिल गर्न गोदावरीका जनप्रतिनिधिले शनिबार अवलोकन गरेका हुन् । गोदावरीमा रहेका केही मन्दिर, मदरसा, चर्च र गुम्बा आदि अवलोकन […]
जिब्रो छेड्ने जात्रा पनि रोकियो यस वर्ष
भक्तपुर, १ वैशाख । कोभिड-१९ महामारीका कारण मध्यपुरथिमिमा वैशाख २ गते मनाइने प्रसिद्ध ‘जिब्रो छेड्ने जात्रा’ पहिलो पटक रोकिने भएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले यस वर्ष बिस्काः जात्रामा मनाइने सम्पूर्ण जात्रा एवं पर्व जात्राकैरुपमा कुनै भीडभाड गरेर नमनाई औपचारिक रुपमा पूजामा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालकले यो जात्रा पनि रोकेका हुन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका […]
हिन्दू धर्म संस्कृतिका राम्रा पक्षहरु
हिन्दू धर्मका प्रमुख विषेशता हात जोडेर नमस्कार भन्नु, हात धोएर खाने तरिकाको विकास गर्नु, ॐ नमो शिवाय जस्ता महत्वपूर्ण काम हिन्दू संस्कृतिमा लागु गरेको देखिएको छ । हिन्दू धर्मले प्रकृतिलाई साथ दिएको छ । जहाँ प्राकृतिक विपरीत काम भएको छ त्यहाँ विनास भएको छ । हात मिलाउदा हात फोहर भएको हुन सक्छ । अंकमाल गर्दा […]
यस वर्ष जिब्रो छेड्ने जात्रा पनि रोकियो
भक्तपुर, १ वैशाख । कोभिड– १९ महामारीका कारण मध्यपुरथिमिमा वैशाख २ गते मनाइने प्रसिद्ध ‘जिब्रो छेड्ने जात्रा’ पहिलो पटक रोकिने भएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले यस वर्ष बिस्काः जात्रामा मनाइने सम्पूर्ण जात्रा एवं पर्व जात्राकैरुपमा कुनै भीडभाड गरेर नमनाई औपचारिकरुपमा पूजामा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चालकले यो जात्रा पनि रोकेका हुन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका […]
धार्मिक आस्थाका केन्द्र सुनसान
नेपालगञ्ज, २८ चैत । श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लाग्ने यहाँस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर अहिले सुनसान देखिएको छ । कोभिड—१९ को महामारीले मुलुक बन्दाबन्दीमा परेपछि माता बागेश्वरी मन्दिरको साँझबिहान हुने सरसफाइ, पूजापाठ, आरतीबाहेक अन्य गतिविधि ठप्प भएको छ । ‘मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आउने भक्तजनको भेटी खर्चको मूलआधार नभए पनि त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गरेको छ’, बागेश्वरी […]
बज्रबाराहीदेवीको जात्रा स्थगित
ललितपुर, २६ चैत । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम फैलिन नदिन लकडाउन जारी भएपछि गोदावरी नगरपालिका–११ स्थित चापागाउँको प्रसिद्ध बज्रबाराहीदेवीको खटजात्रा स्थगन भएको छ । प्रत्येक चैत शुक्ल चतुर्दशीदेखि पूर्णिमा दुई दिनसम्म सोे खटजात्रा मनाउने चलन रहेकामा सम्बन्धित पुजारीबाट आफ्नो परम्परा बचाउने गरी पूजाआजा मात्र चलाउन अनुरोध गरिएको वडाध्यक्ष नीलबहादुर देशारले जानकारी दिनुभयो । जात्रामा पूर्णिमाको […]
महा मृत्युंजय मन्त्रद्वारा लिन सकिन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ
महा मृत्युंजय मन्त्रद्वारा लिन सकिन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ । विश्वमा नोबेल कोरोना भाइरसले त्रसित गरेको अवस्थामा यो मन्त्रको होम गर्नाले रोगको प्रकोप रोक्न सकिन्छ । शिवजीको उपासना र आराधना गर्नाले तत्क्षण लाभ हुने हिन्दू धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरेको छ । आज विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको रोग शान्त पार्न विश्व होम गर्ने समय आएको छ । […]
कोरोनाको कहर यता पनि-ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा पहिलो पटक रोकियो
भक्तपुर, २५ चैत । विश्व र नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत क्षेत्र पनि सम्भावित सङ्क्रमणको मारमा परिरहेको छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै आठरात नौदिनसम्म भक्तपुरमा भव्यरुपमा मनाइने नेपालको एक ठूलो जात्रा बिस्केट जात्रा पनि कोरोना भाइरसकै कारण रोकिन […]
रावणले मर्ने बेलामा लक्ष्मणलाई सिकाएका ३ महत्वपर्ण शिक्षाहरु ! रामायणको एउटा प्रसङग छ, रामको तीरले घाइते रावण जो युद्धभूमिमा अन्तिम साँस लिइरहेका थिए, रामले लक्ष्मणलाई रावणसँग नीति ग्रहण गर्न अनुरोध गरे । रामले लक्ष्मणलाई भने कि ‘यो पृथ्वीले फेरि कहिले पनि नपाउने महाविद्वान, महापराक्रमी रावणसँग जीवनका सत्य सिकेर आउ । राजपाठ बुझेर आउँ ।’ धार्मिक […]
रामभक्त हनुमानको जीवनवाट सिक्नपर्ने ४ कुराहरु । हनुमान रामका परमभक्त हुन् । हनुमान वायुका छोरा मानिएका छन् । उनले कुनै रूप धारण गर्न सक्थे। उनलाई बजरंग बली पनि भनिन्छ किनभने उनको शरीर एक वज्रको समान थियो। दुष्ट आत्माको प्रकोपबाट बचाउने वाला शक्तिको नाम हनुमान हो। ‘मंगलमूरत’को रूपमा अथवा शङ्कट मोचकको रूपमा पुजन गर्न थालिएकोले बच्चादेखि […]
डोटी, २० चैत । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण जिल्लामा बुधबार चैते अष्टमीका दिन कुनै पनि भगवतीका मन्दिरमा पशुबलि चढाइएन । केही मन्दिरमा एक/दुई पुजारीले सामान्य पूजाआजा गरे पनि अन्य मन्दिरमा गत वर्षको जस्तो पूजापाठ र भिड लागेन । यहाँको स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा स्थानीयवासीलाई जोखिमबाट बचाउन […]
श्रीरामचरितमानसको अनुसार यस्ता ४ व्यक्तिसँग कहिलै धन टिक्दैन ! श्रीरामचरितमानस अवधि भाषाको एक रामायण महाकाव्य हो जसलाई गोस्वामी तुसलसी दासले १६ औं शताब्दीमा रचना गरेका थिए । श्रीरामचरितमानसलाई भारतको संस्कृतिमा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त छ । यसमा भगवान् श्रीरामलाई सर्वशक्तिमान नायकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने उही वाल्मीकीय रामायणमा श्रीरामलाई सामान्य मनुष्य भनिन्छ । श्रीरामचरितमानसमा […]
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।। पुरुषोत्तम राम, सीता र लक्ष्मणले वनवासको बेला साढे एघार वर्ष व्यतीत गर्नुभएको चित्रकूट त्रेतायुगमा कस्तो थियो भनी शास्त्रले सामान्य परिचय दिएका छन् । जब श्रीराम रामघाटमा स्नान गर्न आउनुहुन्थ्यो । चित्रकूट के घाटपर भई सन्तन की भीर । तुलसीदास चन्दन […]